"ILAAH HA KUU BARAKEEYO MAALKA AAD BAXSATAY IYO MAALKA AAD REEBATAY"
Wakhtigii jaahilayada ee Islaamka ka hor, waa intuusan islaamin’e, waxaa Cabdiraxmaan lagu magacaabi jiray: "Cabdi Camr", hase ahaatee kolkii uu soo galay diinta Islaamka oo soo islaamay, wuxuu Nebiga (scw) u baxshay magaca Cabdiraxmaan.
Rasuulka (scw) ayaa Cabdiraxmaan weydiiyay inuu guursaday iyo qiimaha uu meher ahaan u bixiyay. Cabdiraxmaan wuxuu yiri haa oo waan guursaday, meher ahaanna waxaan u baxay xabad timir wax le’eg oo dahab ah. Nebiga (scw) wuxuu Cabdirxamaan ku yiri: "casumaad sameey (alla bari) waloow neef arina ha ahaadee, Illaah xaaskaaga iyo maalkaagana ha kuu barakeeyo". Ducadii Nebiga (scw) waa la aqbalay jeer uu Cabdiraxmaan Binu Cawf ka noqdo qof deeqsoon oo maal qabeen ah.
Rasuulka (scw) ayaa Cabdiraxmaan ku yiri: "Illaah ha kuu barakeeyo maalka aad bixisay iyo maalka aad reebatay. Markii uu Rasuulka (scw) go’aansaday duulimaadkii Tabuuka oo ahayd dirirtii ugu danbeesay ee uu Rasuulka qaado intuu noolaa, ayaa waxaa lagama maarmaan noqotay in la helo maal fara badan, waayo ciidanka lagu duulayay ee Roomaanka ayaa ahaa kuwo in badan ka tiro iyo gaadiid badnaa muslimiinta, dhinaca kale sannadka uu dagaalku dhacayayna waxay ahayd sannad abaareed, safarkuna wuxuu ahaa safar dheer oo qaadanaya maalmo. Iyadoo intaasoo arrimood oo dhibaato ah ay jiraan, ayaa waxaa Rasuulka (scw) u yimid qaar ka mid ah mu’miniintii jeclayd inay ka qaybgalaan dagaalka, iyagoo ka codsanaya Rasuulka inuu ka xanbaaro oo uu ka bixiyo qarashka ku baxa safarka, Rasuulku wuu ka cudurdaartay waayo ma uusan haysan wax dhaqaale ah.
Rasuulka (scw) ayaa weydiiyay Cabdiraxmaan su’aashan: "wax maal ah reerkaaga ma u soo dhaaftay". Cabdiraxmaan ayaa yiri: "haa, oo waxaan u soo dhaafay wax ka badan kana wanaagsan maalkii aan bixiyay". Rasuulka (scw) ayaa misna yiri: "waa imisa". Cabdiraxmaan ayaa yiri: "wixii uu Ilaah u yaboohay oo risqi iyo kheyrba ah". Ciidankii Muslimiinta waxay u anbabaxeen Tabuuka, halkaana wuxuu Ilaah ku maamuusay Cabdiraxmaan Binu Cawf wax uusan ku maamuusin mid ka mid ah muslimiinta. Waxaa la gaarey xilligii salaadda, markaa iyada ahna Rasuulka (scw) uu muuqan yahay. Cabdiraxmaan ayaa tujiyay muslimiintii, markii ay dhammaatay rakcadii koowaad ayaa waxaa yimid Rasuulka (scw), ka dibna wuxuu ku xirtay salaadda uu imaamka u ahaa Cabdiraxmaan.
Haddaba, ma waxaa jira wanaag iyo qiimo ka weyn inuu qof tujiyo intuu Eebe (sw) abuuray oo dad ah imaamkooda iyo inta nebiyo la diray imaamkooda. Waxaan u maleenayaa inay jawaabtu tahay: "MAYA". Markii Rasuulka (scw) uu geeriyooday, wuxuu Cabdiraxmaan Binu Cawf u istaagay u-adeegidda hooyooyinka mu’miniinta, waa xaasaskii Rasuulka (scw)’e. Cabdiraxmaan wuxuu u qumi jiray danahooda. Wuu wehelin jiray haddii ay safar galayaan. Wuu la xajin jiray, haddii ay aadayaan Xajka. Wixii ay doonayaan in loo sameeyo oo dhan ayuu u qaban jiray. Taasina waa ammaan ka mid ah waxyaabaha uu ruuxa uu ku faano, dhinaca kale waxaa laga qaadanayaa arrinkan isaga ah kalsooni weyn oo ay haweenka Nebiga (scw) ku qabeen Cabdiraxmaan. Samafalka iyo ixsaanka Cabdiraxmaan Binu Cawf uu u geli jiray haweenka Nebiga (scw) waxay gaartey, in uu maalin iibiyay dhul qiimihiisa dhan ilaa 40 000 oo diinaar, dabadeedna uu dhulkii u qaybiyay reer Banuu Zuhra (reerka ay ka dhalatay Aminatu Bintu Wahb oo ah Rasuulka hooyadiis), masaakiinta muslimiinta iyo masaakiinta muhaajiriinta iyo haweenka Rasuulka (scw). Cabdiraxmaan markii uu diray maalkii uu u qoondeeyay Caa’isha (rc), ayaa waxay Caa’isha tiri hadalkan: "Rasuulka (scw) wuxuu haweenkiisa ku yiri: "idiinma naxayo anniga gadaasheyda aan ka ahayn kuwa saabiriinta (sabarka badan) ah mooyee".
Maalintii ugu badnayd ee uu Cabdiraxmaan sadaqeysto waxay ahayd, markii ay Caa’isha (rc) tiri inuu Cabdiraxmaan Binu Cawf uu ka mid noqon doono ahlu-Janna oo uu geli doono Jannada. Wuxuu u yimid Caa’isha isagoo weydiinaya inay tiri hadalka, waxayna tiri: "Haa oo annigaa ka maqlay Nebiga (scw) inaad jannada gelaysid". Cabdiraxmaan wuxuu la booday farxad, isagoo ku yiri Caa’isha (rc) hadalkan: "hooyo waxaan ku marqaati gashanayaa in safarkan iyo gaadiidka saaran oo dhan aan u bixinayo jidka Alle".
Sidoo kale wuxuu u dardaarmay asxaabtii ka qayb gashay dagaalkii Badar in la siiyo nin kasta 400 diinaar oo dahab ah, sidiina ayuu qof kasta ku helay lacagtaas. Xaasaskii Rasuulka (scw) oo maalintaas noolaa wuxuu tiiba u dardaarmay maal fara badan, ilaa ay Caa’isha markasta Cabdiraxmaan ugu duceyn jirtay ducadan qiimaha badan: "Allaha Cabdiraxmaan ka waraabiyo isha jannada ku taal ee la yiraahdo SALSABIIL".
Daabacaad: Isniin May 22, 2000